❤️ Rahoviana no fotoana tsara indrindra handefasana lahatsoratra ao amin'ny Instagram ? - Winches Club
Rahoviana no fotoana tsara indrindra handefasana amin'ny Instagram ?
Raha manandrana mampitombo ny haavon'ny fifamatorana ianao ary mampitombo ny fototry ny mpanjifanao, ny lahatsoratrao dia tokony hisarika ny saina betsaka indrindra isaky ny mandeha. Betsaka ny zavatra azonao atao mba hampitomboana ny fifamofoanao., ary izy ireo dia niresaka tamin'ny antsipiriany tao amin'ny sehatry ny bilaoginay:
Mikendry azy ireo tenifototra malaza
Manorata bio Instagram miavaka
Mamorona a hatsarana misongadina
Raha manao ireo zavatra rehetra ireo ianao ary mamokatra atiny lehibe, misy zavatra farany azonao atao hahomby amin'ny toeranao:
Manaova lahatsoratra rehefa an-tserasera ny rehetra.
Tsy hamela olona maro hahita ny hafatrao fotsiny izany., fa koa hanamafisana ny fahafahany mampiasa sy mizara. Tokony handinika singa vitsivitsy isika mandritra io asa io. Ka andao aloha hanomboka amin'ny fitadiavana ny fotoana mety indrindra hamoahana ny hafatrao amin'ny Instagram..
Misy fotoana tsara ve hanaovana lahatsoratra amin'ny Instagram ?
Raha afohezina, toa misy andro sy fotoana manokana iasan'ny fiarahamonina Instagram amin'ny ankapobeny. Zahao ity kisary ity izay mampiseho ny haavon'ny fifamatorana Instagram ao amin'ny CST : (CST dia 5 ora aorian'ny GMT)
Ity latabatra ity dia mampiseho fa ny andro tsara indrindra handefasana amin'ny Instagram dia:
Ary hitantsika fa ny fotoana tsara indrindra apetraka amin'ny Instagram dia:
Alarobia 11 ora maraina
Alarobia 1 ora tolakandro
Zoma amin'ny 9 ora maraina
Zoma 10 maraina
Azontsika atao ihany koa ny mahita fa ny andro ratsy indrindra handefasana dia:
Ary ny fotoana ratsy indrindra handefasana dia:
Isan'andro amin'ny 10 ora alina ka hatramin'ny 4 ora maraina.
Ity irery ity dia manome antsika teboka fiandohana tsara ho an'ny lahatsoratra amin'ny fotoana mahamety azy mba hahazoana tombony betsaka indrindra..
Ahoana ny momba ny faritra? ?
Ny faritry ny fotoana dia singa iray mamaritra ny fisafidianana ny fotoana mety indrindra handefasana amin'ny media sosialy. Raha any ivelany ny ankamaroan'ny mpihaino anao, tokony hoheverinao ny mampifanaraka ny paikadinao amin'ny famoahana lahatsoratra mba hahatratrarana ny fandaharam-potoanan'ny olona karamaina.
Midika izany fa raha any UK ianao ary misy olona marobe any Etazonia sy Kanada izay liana amin'ny atiny anao, tokony hampiasa ny tabilao etsy ambony ianao ary ampio ora 5 amin'ny fotoana tsara indrindra.
Ohatra, raha any UK ianao ary misy olona marobe any Etazonia sy Kanada izay liana amin'ny atiny anao, tokony hampiasa ny kisary etsy ambony ianao ary ampio adiny 5 amin'ny fotoana tsara indrindra :
Raha te handany ny Alarobia 11 maraina ianao any Chicago, tsy maintsy mandefa eto amin'ny UK amin'ny 4 ora hariva ianao.
Raha te hikasika ny zana-potoana roa miaraka ianao, eritrereto ny mizara ny fahasamihafana ary mahazo ny vaovao farany amin'ny firotsahana amin'ny UK amin'ny alàlan'ny fandefasana amin'ny 2 ora tolakandro, mba hahazoana fanoloran-tena tsara any Etazonia manomboka amin'ny 9 ora maraina..
Misy fitaovana manampy anao hiova amin'ny fotoana manokana tsy tapaka amin'ny alàlan'ny fandaharam-potoana.
Ao an-tranon'i IBF, Nampidirinay tao amin'ny sehatray ny programmer iray tsara indrindra izay mamela anao hanangana fandaharana amin'ireo toby tsy mila manahy momba izany.
Jereo hoe rahoviana ny mpihaino anao no mavitrika amin'ny fampiasana ny fomba fijery Instagram
Raha manana kaonty orinasa Instagram ianao, Ny Instagram dia manamora ny fahitana ireo metrika fampirafesanao manokana miaraka amin'ny Instagram Insights. Instagram Insights dia manome anao angona manokana ho an'ny kaontinao, tsotra ny mahatakatra azy ary mora idirana:
Fidirana ao amin'ny pejin'ny kaontinao amin'ny alàlan'ny fanindriana ny kisary eo ankavanan'ny farany amin'ny sarin'ny piraofilinao
mpanao gazety eo amin'ny menio “hamburger” ambony ankavanana
mikasika ny safidy Insights miaraka amin'ny tabilao bara eo akaikiny
Azonao atao ny mifamadika avy amin'ny antontan'isa atiny mankany amin'ny angona momba ny hetsika sy ny refin'ny mpihaino.
Misaotra an'ireto sary ireto, afaka mahazo fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny fandraisan'anjaran'ny mpihaino anao ianao, ary koa oviana ary aiza no misy azy.
Azontsika jerena izany noho io kaonty io, Ny alatsinainy sy alarobia no andro tsara indrindra tamin'ny fitomboan'ny mombamomba, izay mifanaraka amin'ny latabatra fanoloran-tenantsika amin'ny ankapobeny. Afaka mahita ny toerana tsara indrindra ihany koa isika, izay fampahalalana tsara ho fantatra rehefa mandinika ny faritry ny fotoana sy ny fotoana famoahana.
Miaraka amin'ity fampahalalana ity, tokony ho azonao atao ny mamaritra ny teboka marinao marina amin'ny fampisehoana mba hahatratrarana ny haavon'ny fifamatorana.
Azontsika atao koa ny mahita zavatra toy ny fahasimban'ny lahy sy ny vavy, ary koa ireo fotoana mazoto indrindra ireo mpanaraka an'ity kaonty ity.
Atombohy ny fanatsarana ny hafatrao Instagram
Raha tena maniry hampitombo ny kaontinao ianao ary mahazo ny haavon'ny fifamatorana mety indrindra, tsy maintsy mampiasa ireo rafitra ireo ianao mba hanasoavana anao. Misy ihany koa ny rindranasa antoko fahatelo hafa mamela ny mpampiasa Instagram hahita fampahalalana hafa momba ny kaontiny amin'ny fomba izay ilaina amin'ny fitomboan'ny kaontiny..
Fanaraha-maso ara-tsosialy manome fampahalalana tsotra sy lalina hahafahanao mahatakatra tsara kokoa ny mpihaino anao ary manara-maso ny fivoaran'ny kaontinao. Fitsarana maimaimpoana izao no ataon'izy ireo, ka misorata anarana ary manomboka izao. Azonao atao ny manambatra azy amin'ny anay rindrambaiko mandeha ho azy manan-tsaina ary manorata famoahana amin'ny fotoana mety indrindra hahazoana ny fifandraisan-tanana faran'izay betsaka amin'ny kaontinao.
Lahatsoratra teo alohaTsy avelan'ny Instagram hiditra aho : Torolàlana fanamboarana
Lahatsoratra manarakaAhoana ny fomba hanampiana tantara ao amin'ny Instagram